A gam akporo / Chrome OS ngwakọ os anwale na Nexus 9 ka Andromeda | Akụkọ akụrụngwa
Google nwalere Andromeda, ngwakọ ya gam akporo / Chrome OS, na Nexus 9
Ọktọba 4 agaghị adị mkpa maka Google maka ngosipụta nke ngwaahịa niile ahụ, dị ka Pixel, Homelọ Google, DayDream na Chromecast 4K, mana sọftụwia ahụ ga-enwekwa nnukwu uru maka ihe enyemaka Google ga-apụta na ọ nwere ike ịbụ na anyị nọ n'ihu Andromeda, ya Gam akporo / Chrome OS.
Ugbu a, anyị maara na sistemụ arụmọrụ gam akporo / Chrome OS gị adịla n'ime a na-akpọ "Andromeda" nakwa na a na-anwale ya na ngwaọrụ Nexus 9. Ee, mbadamba nkume ahụ gafere na-enweghị nlebara anya ma mepụtara ya HTC 2 afọ gara aga. Ọ bụ n'oge a ka enwere ihe akaebe doro anya na Andromeda nwere ike ịpụta na October 4.
Google ga-anwale ngwa ngwa OS ya na Nexus 9 nke HTC mere. Ihe akaebe sitere na ihe achọtara na AOSP nke gam akporo 7.0 Nougat. Nke mbụ bụ faịlụ ahụ "SurfaceCompositionTest.jave", nke na-anọchi anya usoro nyocha dị ala iji tụọ arụmọrụ ndịna-emeputa. Ule a na-eme Ntụziaka kpọmkwem na Andromeda n'ọtụtụ oge, gụnyere Andromeda chọrọ akara arụmọrụ dị elu.
Dị ka ngwá ọrụ a si kwuo, opekempe akara dị mkpa igba ọsọ Andromeda bụ 8.0. Site n'iji ya tụnyere, gam akporo chọrọ 4.0 naanị na Nexus 9 enweela ike inweta akara nso 8.8.
Ugbu a, ihe omimi dị na ihe kpatara Google ga-eji nwalee gam akporo / Chrome os na mbadamba nkume ahụ. Site na ihe amara, Andromeda lekwasịrị anya n’inweta gam akporo ka mma maka ngwaọrụ dika obere, dị ka ndị ahụ 2 na 1 na ma eleghị anya ọbụna mbadamba. Ihe ederede ọzọ achọtara na AOSP na-ezo aka na njikwa njikwa windo n'efu nke pụtara n'afọ niile na gam akporo Nougat.
Ọ bụ «SurfaceCompositionMeasuringActivity.java» nke kwuru na ọ na-achọpụta ngwaọrụ gam akporo maka ịnwe njirimara nke njikwa windo n'efu. Site na ihe ọ dị ka, ihe niile lekwasịrị anya na nzọụkwụ ọzọ na gam akporo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Google nwalere Andromeda, ngwakọ ya gam akporo / Chrome OS, na Nexus 9
Samsung Galaxy S8 ga - ebu Exynos 8895 processor na Mali-G71
'Sgbọ ala nke Google na-anya onwe ya nọ n'oké ihe mberede, ma ọ bụghị mmejọ